Arbaco, Abriil 18, (HOL) — Magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa waxaa lagu ansixiyay maanta oo Arbaco ah dastuurka. Akhriso Dastuurka Cusub ee Dowlada Puntland. February 9, pm Views: Akhristayaal waxaan halkaan idinku soo bandhigeynaa dastuurka. Garowe. Dib-u-eegidda Dowladda Puntland Qabyo qoraalka Dastuurka Federaalka ee Somalia (soo gaaray 30/04/). Cinwaanka oo.
Author: Gardazshura Moramar
Goluhu ma kordhin karo wadarta guud ee kharashka miisaaniyadda, haddiise ay Golaha la noqoto in miisaaniyadda la dhimo ama wax laga badalo ku-talagalka madaxyadeeda waa in la wargaliyaa Xukuumadda, la tashina lagala yeeshaa intaan loo codeyn. Dawladda Puntland waxaa u bannaanaanaysa in ay dib u eegto arrimaha ku xusan faqradaha 1aad, 2aad iyo 3aad ee isla dsstuurka, haddii: Ku- Xigeennada Garyaqaanka Guud.
Eedaysanaha laguma hayn karo meel aan qaanuunku bannayn. Maxkamadda Dastuuriga punrland waajib ku ah in ay Madaxweynaha ugu soo gudbiso natiijada baaristeeda shan iyo toban 15 bari gudahood.
In uu difaaco danaha Dawladda Puntland iyo dadweynaheeda. Dadka Dawladda Puntland waa dadka haysta jinsiyadda Puntland.
Inta aan Wasiirka loo yeerin waa in la wargaliyaa Madaxweynaha. Xafiiska Hantidhawrka Guud wuxuu awood u leeyahay soo saaridda awaamir iyo qaab habraacyo ku aaddan gudashada xilalka hantidhawrka guud. Qodobka 60aad ee dastuurka Puntland asna wuxuu caddaynayaa in aan marnaba la kordhin karin tirada 66 ka xubnood ee baarlamaanka Puntland, illaa la dhammeeyo tirokoob dadka deegaanka, la abuuro oo ay hawlgalaan xisbiyo siyaasadeed oo caburin ka madaxbannaan, deedna la galo doorasho madaxbannaan.
Eedeysane kasta waa in 48 saacadood gudahood xariggiisa maxkamadi ku xalaaleyso. Maxamed xasan Bare oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland ayaa waxaa uu ku tilmaamay ansixinta dasuurka waa cusub oo Puntland ay uga guuratay habkii wax qeybsiga qabiilka uguna gudubtay doorasho iyo Dimuquraadiyad. Waa inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi dhaxe ama wax u dhigma. Labada xaaladoodba waa in uu Madaxweynuhu ka talo qaataa sharciyaqaan. Golaha Wakiilladu waxaa la gudboon in ay hal-abuurkaas ku qiimeeyaan kalfadhiga socda ama kan ku xiga, jawaabna siiyaan codsadayaasha.
Wasiirka dastuurka Puntland oo kahadlay shirarka dastuurka Soomaaliya ee Muqdisho (dhegayso)
Isagoo xusay in wixii ka dambeeya bisha Juun ee sannadkan la furan karo xisbiyo. Puntland waxay aqoonsan tahay mabaadiida aayo-ka-talinta ummadaha adduunka.
Qof kasta oo Dawladda u shaqeeya oo ku geeriyooda hawlgal, waxaa laga bixiniyaa magdhow sharciga waafaqsan. In uu hogaamiyo baarista dambiyada, isla markaana ka oogo eedeymaha ciqaabeed Maxkamadda horteeda mar kasta oo loo baahdo. Qodobada 1aad, 2aad iyo 3aad ee Madaxa I, qaybtiisa 1aad ee Dastuurka, waxaa wax lagaga badali karaa afti dadweyne oo qura. Maxkamadaha derejada koowaad waa meesha ay ka bilowdaan dhageysiga dhammaan dacwadaha, marka laga reebo kuwa Xukuumaddu dhinac ka tahay, kuwaasoo ay dhageysato Maxkamadda Sare.
Marka taas lagu tallaabsanayo waa inuu jiraa amar garsoore oo sababaysan. Xoghayaha Maxkamadda sare ayaa noqonayaa Xoghayaha Maxkamadda Dastuuriga.
Waxaa kaloo Guddiga Culimada lagala tashanayaa magacaabista garsoorayaal Shareecada Islaamka ee ka hawlgala Maxkamadaha kala duwan ee Puntland, hadba sidii loogu baahdo.
Dastuurka Puntland oo la ansixiyay – BBC News Somali
Qofka maxbuuska ah waxaa lagu dhaqayaa xuquuqda caalamiga ah ee maxaabiista. Eedaysanuhu waxa uu xaq dastuurkaa leeyahay in ay soo booqdaan eheladiisa, qareenkiisa, dhakhtarkiisa iyo asxaabtiisa, waana la damiinan karaa haddii sharcigu oggol yahay.
Arbaco, Abriil 18, HOL — Booliiska dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa saakay xabsiga u taxaabay askari toogasho ku dhaawacay mid ka mid ah ardayda wax ka barta sastuurka Muqdisho, kaddib markii uu rasaas ku furay gaari BL ah. Maxkamadda Dastuuriga ah ayaa ilaalinaysa inaan qofna xaquuqdiisa lagu xad gudbin, sharci gaar ah ayaana qeexaya sida Maxkamadda Dastuuriga ay u gudanayso xilkaas.
Golaha Wakiillada ayaa ansaxiya magacaabistiisa iyo ruqseyntiisaba. Golaha wakiillada waxaa mashruuc-sharci horgeyn kara oo keli ah: Punltand Xukuumaddu muddo shan iyo toban 15 maalmood ku soo jawaabi weydo, waxaa loo qaadanayaa in ay aqbashay isbdalka. Maxkamaddu waxa ay u hoggaansamaysaa sharciga oo keli ah, maammul ahaan iyo garsoor ahaanba. Xeer ayaa xadaynaya hantida gaarka ah ee loola wareegi karo dan guud iyo habraaca loo marayo qaramaynteeda.
Haddii jago-garsoore ama ka badani ka bannaanaato Maxkamadda Dastuuriga, sabab kasta ha ku timaadee, waa in lagu buuxiyaa afartan iyo shan 45 maalmood gudahood. Guddiga gaarka ah ee dib u eegidda Dasturka Puntland wuxuu Dastuurka Puntland waafajinayaa kan Federaalka, iyadoo uu mudnaanta leeyahay Dastuurka Federaalka.
Xarunta Hantidhawrka Guud waa Caasimadda Puntland, wuxuuna leeyahay awood ku baahsan Puntland oo dhan.
Inta Aftida ka horeysa wuxuu Dastuurkani sii ahaanaya mid sharci ahaan lagu sii dhaqmo, laga bilaabo marka uu Golaha Wakilladu ee Puntland ansaxiyo, isagoo badalaya kii ka horeeyay ee ku meelgaarka ahaa. Waxaa reebban in muwaaddin Puntland ah loo gacan geliyo dal kale. Faroole ayaa Isimada Puntland oo madasha fadhiyey u sheegey in aysan shaqo ku lahayn dastuur, uusanna jirin dastuur la badali karo, iyo kuraas baarlamaan oo la kordhin karo. Haddii Madaxweynuhu aanu diidmo ka muujin waa inuu saxiixo, nuqulna u diro Golaha Wakiillada isla markaasna amro in faafinta rasmiga ah lagu soo saaro, nuqulna lagu kaydiyo Madaxtooyada.
Muddada xilhaynta xubnaha Maxmadda Sare ee rasmiga ah iyo kuwa kaydka ahba waa shan 5 sano, marka laga reebo doorashada koowaad oo noqonaysa sida soo socota:. Abdiweli Mohamed Ali, hailed the event as an important support to Somalis.
Dastuurka Puntland oo la Ansixiyay
Guddiga Doorashada Puntland ee ugu horreeya waa ku meel gaar, waxaa laga dhex dooranayaa Dadwaynaha wuxuuna ka koobnaanayaa 9 sagaal xubnood. Shuruudaha uu Golaha Garsoorka u adeegsanayo shaqaalaynta garsoorayaasha iyo shaqaalaha kale waxaa lagu qeexayaa sharci gaar ah.
Awoodaha Dawladda Puntland ay ku wareejin doonto dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo xuquuqaha ay yeelanayso Puntland, waxa ay ku imaanayaan wada xaajood iyo heshiis dhexmara Dawladda Federaalka iyo Dawladda Puntland, laguna qeexi doono Dastuurka Federaalka ee Soomaaliya. Golaha Wakiillada waxaa la kala diri karaa punt,and Xubnaha Golaha Deegaanka fadhigooda ugu horreeya waxay ay iska dhex dooranayaan Shir-guddoomiye iyo Ku-Xigeen oo iyagu guddoominaya Golaha.
Faroole: Dastuurka Puntland waa Kaas, Qabiil Kuma Dhisna oo waa Mid ku Dhisan Deegaan”
Eedaysanaha waa in maxkamadda awoodda u lihi si tifaftiran ugu akhrido uguna macnayso dembiga lagu soo oogey. Qofka aan muslimka ahayni xor ayuu u yahay Caqiidadiisa, lagumana khasbi karo mid kale. Madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa ka dalbaday wadamada bariga Afrika inay taageeraan nabad u raadinta Soomaaliya.